नेपाल आज | अहिले त दशैंमा आउने खसी पनि संगीनी सुइ लगाएकाजस्ता लाग्छन् ! (भिडियाेसहित)
अहिले त दशैंमा आउने खसी पनि संगीनी सुइ लगाएकाजस्ता लाग्छन् ! (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । हाम्रो समयको दशैं सम्झिदाँ साह्रै रमाइलो लाग्छ । त्यो बेलामा पैसा हुनेले मात्र घर घरमा खसी काट्थे । पैसा नहुनेले मासु बाहिरबाटै किनेर ल्याउँथे । त्यतिबेला दशैंको सबैभन्दा राम्रो पक्ष नयाँलुगा लगाउन पाउने, मासु खान पाइने, नातेदारबाट टीका लगाउन पाइन्थयो ।
त्यतिबेला एक रुपैयाँ पाउँदा पनि ठूलो हुन्थ्यो हाम्रो लागी । एक पैसा खर्च गर्दा चार किसिमका सामान किन्न पाइन्थ्यो । अहिले त जमाना कताबाट कता पुग्यो । एक जोर जुत्ता लगाउन खाली खुट्टा हिँड्नुपथ्र्यो ।
जुवा र रक्सीमा म कहिल्यै लागिन । हाम्रा पूर्वजहरुले धेरै रक्सी खाइदिएका हुनाले अहिलेका गायकहरुले रक्सी नखाई गीत गाउँदैनन् । म त्यसमा पर्दिन । गीत गाइसकेछि बरु टिलपिल भएर खाएर बाटोमा लडे पनि मलाई केही मतलब छैन । तर, गीत गाउँदा कहिल्यै पनि रक्सी खाइनँ । यदि खाएर गीत गाउन गयो भने पनि गीत बिग्रन्छ ।
अहिले खसी पनि संगीनि सुइ खाएको जस्तो हुन्छ । दुई तीन महिनामा बढ्छ भन्छन् । मासुमा त्यत्ति धेरै सौखिन छैन । म काठमाडौंको कुखुरा पनि खान्न । काठमाडौंको कुखुरा जति सबै भुसमा पालिएका हुन्छन् । त्यसकारण यहाँको कुखुरा खाने बानी छैन । दशैंमा दक्षिणामा कति खर्च हुन्छ भन्नेबारे अनविज्ञ छु । टीका मैले लगाइदिन्छु दक्षिणा श्रीमतिले खाममा हालर दिन्छिन् ।
interview of kumar basnet
अफगानिस्तनको हेलमन्द प्रान्तमा दाह्री नकाट्न हजामलाई तालिबानको उर्दी